Imizamo Yakho Yokumaketha Nge-imeyili Ayinendaba Uma Ungeyona I-Mobile Optimized | Martech Zone
Njengoba besifuna ukwenza ngcono ukuzibandakanya kwethu, into yokuqala esiyenzile ukusebenzisa izibonisi ze-imeyili eziphendulayo sisebenzisa ipulatifomu yethu, CircuPress, ukusabalalisa okuqukethwe (Bhalisa nsuku zonke noma masonto onke). Ukushintshwa kwezibalo kwakungamangalisa neze. Sithumela i-imeyili yethu yamasonto onke kubabhalisi abangaphezu kwama-70,000 ngoMsombuluko nakithi analytics kusikhombisa ukuthi lokho kuyisiphukuphuku kuthrafikhi yethu ngaphezu kwanoma iyiphi enye indlela noma iphromoshini.
Akuzange kwenzeke kuze kube yilapho ama-imeyili ethu elungiselelwe ukubukwa kweselula, noma kunjalo! Ukuhlelwa kwekholomu ehlanzekile, nekholomu eyodwa okulula ukuchofoza izinkinobho ezinkulu nezixhumanisi kwenza wonke umehluko ekusunduzeni abantu kusuka ku-imeyili babuyele ezindatshaneni. Manje sisebenza ekwakhiweni kabusha kwebhulogi ngokuphelele ukuze inikeze umuzwa omuhle, ophendulayo nge-desktop, mobile noma ithebhulethi.
Sithande noma cha, ukusebenzisa amadivayisi eselula sekuyinto yesibili kithi. Izwe lihamba kahle futhi lihamba ngempela. Abathengi baziphatha ngendlela ehlukile kuma-smartphone nakumathebulethi, ahlinzeka ngokusebenza okuhlukile kanye namakhono, futhi kumabhizinisi amaningi lokhu kusho ukuthi bangaqala kalula ukubona amanye amakhasimende abo ehamba uma ukumaketha kwabo kwamaselula kungeyona into yokuqala. Ukuba nesu leselula elisebenzayo lisebenza ekugcineni amakhasimende ebuya. UCiaran Carlisle, i-DisplayBlock
Izibalo azisondeli nakancane kuselula… uma i-imeyili yakho noma isayithi lakho kungesona isipiliyoni esihle somsebenzisi kudivayisi ephathekayo, uphonsa ithani lotshalo-mali lwakho lokumaketha kude. Nazi izibalo ezi-3 zakho:
Ukuvulwa kwe-imeyili yeselula kukhule ngo-180% eminyakeni emithathu nje kusuka ku-15% kuye ku-42%!
Ukuqhuma U-68% we-Gmail ne-Yahoo! iyavula zenzeka kwi-smartphone noma kuthebhulethi.
Ama-imeyili angama-75% abukwa kumadivayisi eselula kungenzeka zisuswe uma kungenakulungiswa iselula.
Tags: izibalo zokuthengisa nge-imeyiliisilinganiso esivulekile se-imeyiliizibalo ze-imeyiliUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethii-imeyili ephathekayoi-imeyili ephendulayo yeselulai-imeyili ephendulayosmartphonei-imeyili ye-smartphonei-imeyili yethebhulethi
Uma Uqoqa Idatha, Ikhasimende Lakho Linakho Lokhu Kulindelwe
Sep 6, 2014 ku-1: 00 AM
Lelo qiniso elimangazayo ukubona ukuthi iningi labasebenzisi be-smartphone livula ama-imeyili kumaselula alo !!!